Talaallii COVID-19 Ijoollee fi Dargaggoo umriin 12-17 - King County
King Kaawuntii keessatti talaallii argachuu Talaallii dargaggoo
Qulqulleessu haqa Gaaffiwwan Deddebi’anii Gaafatamani Waliigalaa
Talaallii COVID-19 Ijoollee fi Dargaggoo umriin 12-17
Waxabajjii 21, 2022: Daa'immanii fi ijoolleen ji'a 6 fi isaa ol ta'an amma talaallii COVID-19 fudhachuu ni danda'u
Talaalliin COVID-19 Moderna fi Pfizer(faayzar) amma nama umriin isaa ji'a 6 fi isaa ol ta'eef yeroo mudaamatif akka oolu hayyamameera.
Bakkeewwan talaallii dhiyeessii eegaacha yaalamttoota xixiiqoo ta’an tajaajiluuf qophaa'aa jiru, kanaafuu bakki talaallii itti kennamu hundi garee umurii kanaaf talaallii kennuudhaaf hatattamaan qophii hin ta’u. Beellamni talaallii dabalataa jalqaba ji’a Bitootessa keessa jiraachuu qaba.
Baakkee fi beellama talaallitif Kiing Kawuuntii keessat talaallii argachuudhaf kan jedhu daawwadha.
Seera qabbessa kan ta’e enyudhaa?
Namnii kamiyyuu kannumriin isaa kan waggaa 5 fi ol ta’ee kamiyuu yeroo amaamttii talaalii COVID-19 talaalamuudhaaf seera qabbeesa dha. Yeroo ammaa kanatti, talaallin, COVID-19 ijoollee umriin isaani waggaa 5 gadii jirannif seeran hin eyyamamne. Daa’imanii xixiqoodhaf yaalin kilinikaalaa ammallee yaalamaa jira.
Warra umriin isaani kudhanaan kessa jirannif filannowwan talaalli COVID-19
Pfizer: umrii waggaa 5 fi ol
Johnson & Johnson: umrii waggaa 18 fi ol
Moderna: umrii waggaa 18 and ol
Yemmuu sagantaadhaaf belamamtuu, talaalin siff kennamee akka ramadii umrii kettiit akka ta’ee mirkannefadhu.
Talaallii COVID-19 umri 5-17 tiif (PDF)
Gaaffiiwwanii fi deebiiwwan warraa fi guddiftootaa (PDF)
Gara sagantaa belama talaalli kettitii yemmuu dhuuftu wanta qabattee dhuftu
Sanada urmi kee mirkannesuu: kutaa biyya, gosa, ykn waraqaa enyuummaa kan federalan kenname, waraqa raqaa dhalootaa, warqaa enyumaa mana baruumsa, ykn waraqa ragaa mana yaalaa kan maqaa fi guyyaa dhalootaa qabu fayadamuun ni danada'ama.
Ciqilee olaanaa keettii irrattii taalilicha warraannamuudhaaf akka mijaawuf shamizii kan dachafama dheeraa qabu ykn kan dachafamnii isaa salphaa ta'ee fi kan hin cinqinee uffadhu.
Waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu: Yoo umrii 18 gadi taate, talaallii argachuuf waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabu si barbaachisuu mala. Ofumaaf waliigaluu dandeessa yoo kan bilisa baatee taate, yoo nama gaa’eessa fuute/itti heerumte, ykn yoo bakkeen talaallii ati nama umriin daa’imaa bilchaate (Ingiliffaan) jedhee murteesse. Bakkeewwan talaallii martuu murtee umriin daa’imaa bilchaate kennuu hin danda’an.
Namoonni gaa’eeyyin eeyyama qaban waliigaltee ijoollef gochuu danda’an kan dabalatu:
Nama gaa’eessa si’iif murteewwan yaalaa gochuuf eeyyama mana murtee (seeran guddisaa, kunuunsaa, ajaja manaa ala kaa’uu) qaban
Nama gaa’eessa si’iif murteewwan yaalaa gochuuf eeyyama barreeffamaa warra keetii qaban
Nama gaa’eessa kunuunsa fayyaa keetif itti gaafatamu
Haala tokko tokkotti, nursii mana baruumsaa, gorsaa mana baruumsaa, ykn bakka bu’aa barataa mana hinqabnee
Yoo namni gaa’eesssi eeyyama qabuu si wajjin beellama talaallii irratti argamuu baate, waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu ykn seeran bilisa ba’uu maalin akka mirkaneeffattu dhiyeessa talaallii kee wajjin ilaali.
Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii – unka waliigaltee ijoollee talaallii COVID-19 (PDF)
Unka kuni bakkeewwan talaallii Fayyaa Hawaasaa – Siyaatil fi King Kaawuntii irratti fayadamu, bakkeewwan talaallii Auburn fi Kent fi kilinikoota Fayyaa Hawaasaa dabalatee. Yoo namni gaa’eesssi eeyyama qabuu si wajjin beellama talaallii irratti argamuu baate, unka kun akka waliigaltee barreeffamatti fayyadam. Hojjatoonni Fayya Hawaasaa waliigaltee afaanii bilbilaan ykn nama gaa’eessa ta’erraa yaadachiisa barreeffamaa fudhachuu ni danda’u. Yoo beellamni talaalii keessanii bakkee Fayyaa Hawaasaatti ta’uu baate, waliigaltee nama gaa’eessa eeyyama qabuu ykn seeran bilisa ba’uu maalin akka mirkaneeffattu dhiyeessa talaallii kee wajjin ilaali.
Akka seera mirga siviilii/nama lolutuu hin taanee kan Feedeeraala tti , Fayyaan Hawaasaa- Siyaatilii fi Kiing Kaawuntiin sagantaa ykn sochiiwwan kam irratti iyyuu haala ramaddii eegumsa dhuunfaa, sanyittii qofa otto hin daangoofne; bifa, bakkee dhalootaa, amantii, saala (haala saala ofii ibsu dabalatee), qabachiisa saalaa, miidhama qaamaa, umurii fi haala heerumsaa irratti hundaa'uudhaan qooda hin taasisu. Himannaa yoo qabaattanii fi iyyata banuu yoo barbaaddan, ykn tarii qoodumsa irratti gaafii yoo qabaattan, maaloo sagantaa mirga civilii kan Kiing Kaawuntii teessoo armaan gadiitiin quunnamaa: civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (hiika afaaniitiif maaloo afaan dubbattan ibsaa; TTY Relay 7-1-1; ykn karaa poostaatiin (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).
Link/share our site at www.kingcounty.gov/youthvaccine/oromo